रूसी परम्परा: बाबा यागा | Absolut यात्रा
रूसी परम्परा: बाबा यागा
मारुउजेन | | Rusia
अगस्त २२ अन्तर्राष्ट्रिय लोक कथा दिवस हो र संस्कृतिको अभिव्यक्ति जसले मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्छ र चुटकुले, हितोपदेशहरू, नृत्यहरू, कथाहरू, किंवदन्ती, संगीत ... यहाँ र त्यहाँ त्यहाँ लोककथा छ, र रूसको सन्दर्भमा एउटा लोक चरित्रको सबैभन्दा लोकप्रिय छ कि Baba Yaga.
यो स्लाभिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएकोले वास्तवमा सीमाहरू पार गर्दछ, तर यसले गैर स्लाभिक कथाहरू, कॉमिक्स, फेशन म्यागजिन र सिनेमाको संसारमा पनि पुगेको छ। आज, Absolut Viajes मा पुरानो बाबा यागाको हातबाट केहि रूसी लोक कथा।
1 यागा बेरी
2 बाबा यागाको कथा
3 लोकप्रिय संस्कृतिमा बाबा यागा
हामीले अघि भनेझैं स्लाभिक लोक कथनबाट एक चरित्र हो र यो धेरै पुरानो हो। यो एक को बारे मा छ अलौकिक अस्तित्व जुनaको रूपमा देखा पर्छ बुढो महिला वा बहिनीहरूको एक त्रिकूट तिनीहरू उही नाम साझा। ऊ सामान्यतया कुखुरामा वा कुकुरमा बस्छ जुन कुखुराको हड्डीहरूमा समर्थित हुन्छ भनिन्छ।
यो एक छ अस्पष्ट हुन। जसरी त्यहाँ कथाहरू छन् जसमा यो देखिन्छ बच्चा भोज, त्यहाँ अन्य पनि छन् जुन यो होaमातृ वृद्ध महिला जसले यसलाई पार गर्छ वा यसलाई खोज्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, उहाँ वन्य जीवन र बया यागा सबैको साथ सम्बन्धित छ पूर्वी यूरोपका सबै लोककथाको सबैभन्दा अविस्मरणीय व्यक्तित्व मध्ये एक हो।
स्लाभिक संसारमा सीमानाहरू पार गर्ने चरित्र भएको कारण, उहाँको नाममा भेरियन्टहरू छन्। शब्द बाबा पुरानो रूसी र अर्थ बुझाउँछ सुँडेनी, जादूगरनी, भाग्य टेलर। आज, आधुनिक रूसीमा, शब्द babushka, हजुरआमा, उनीबाट व्युत्पन्न, उदाहरण को लागी, वा पोलिश हजुरआमा, पनि। त्यो एकातिर, तर अर्कोतर्फ त्यहाँ केहि यति सकरात्मक अर्थ वा शब्दको प्रयोगहरू छैनन्।
तसर्थ, यो बाबा बाबाको अस्पष्टताबाटै लोकगीत चरित्रको बारेमा विभिन्न कथाहरू देखा पर्दछन्। एकै समयमा एक मातृ वृद्ध महिला र दुष्टको सक्षम हुनुको।
र यसको अर्थ के हो यागा, नामको दोस्रो तत्व? व्युत्पत्तिक भाषामा भन्नु पर्दा यसको उत्पत्ति पाउन एकदम गाह्रो छ, तर धेरै स्लाभिक भाषाहरूमा यसको जरा यस्तो चीज जस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ। रिस, डर, त्रास, क्रोध, बिमारी, पीडा...
बाबा यागाको कथा
नाम र चरित्र अस्पष्टताको बारेमा यस विवरणको साथ, बाबा यागाको कथा के हो? यस प्रसिद्ध डायनको बारेमा धेरै कथाहरू छन् र हामी ती सबै पाउँछौं युक्रेन, रसिया र बेलारुस मुख्य रूपमा।
यो एक छ बूढा महिला, कुखुराको हड्डीले बनेको टोपीको साथएक संग एस्कोबा, सधैं एक मोर्टारको नजिक। उसको झुप्पो हड्डीले बनेको हुन्छ र यसको साथ ऊ जहाँसुकै घुम्दछ, हावाबाट मोड्न सक्षम हुँदै। यो केहि प्रभावशाली छ किनकि यो खोपडीले सजाइएको छ र भित्र धेरै आकारको मैनबत्तीहरू छन्, जलाइएको र अनलिट। भित्र, त्यहाँ रक्सी र मासु पनि छ र वर्णक्रमीय नोकरहरु कसले यो सेवा।
धेरै कथाहरू उनको एक वर्णन गर्दछ तीखो दाँत र सुख्खा, कालो छालाको साथ बूढी महिला। मुख्य रूपमा ती कथाहरूमा जसमा यसले यसको शिकार खान्छ। तर, अन्य कथाहरूमा ती जहाँ उनी राम्रा छन्, वर्णन साधारण बुढी महिलाको भन्दा छ।
तपाईं सबै प्रकारका कथाहरू पढ्नुहुनेछ: त्यो बच्चाहरूलाई खाउँदछ, आत्मालाई खान्छ, मृत्युको मिति निर्धारित गर्दछ मान्छे को, के हो मनमोहक, जसले बच्चाको बलिदानहरूको लागि सोध्छ धनको बदलामा, कि उसको घर जीवितको संसार र मृतहरूको संसारको बीचको पुल हो।
त्यसोभए, तपाईंले पढ्नु भएको कथाको आधारमा, तपाईंले बाबा यागाको एक वा अर्को संस्करण देख्नुहुनेछ, र त्यो पनि जुन यो वृद्ध महिला होइन तर तीन बुढाई हो। त्यहाँ छन् दुई थप लोकप्रिय कथाहरूमलाई बाँकी थाहा छ।
यस हिसाबले, बहिनीहरूको त्रिकुति, कथा हो लेडी जार, १ th औं शताब्दीमा अलेक्ज्याण्डर अफानासिएभले संकलन गरेका थिए। नायक इवान हो, एक व्यापारीको सुन्दर छोरा, जसले तीन बाबा यगालाई भेट्छन्।
पहिले ऊ केबिनमा दौडिन्छ र पहिलो बहिनीसँग, तिनीहरू कुरा गर्छन् र उसले उनलाई अर्को बहिनीसँग कुरा गर्न पठाउँदछ, पहिलो जस्तै समान। उसले अघिल्लोको शब्द दोहोर्‍यायो, उही प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ, तर उसले तेस्रो र अन्तिम बहिनीलाई पठाउन उसलाई पठाउँदैन किनकि उसले उसलाई भन्छ कि यदि ऊ रिसायो भने ऊ उसलाई खानेछ।
तर उसले तपाईंलाई चेताउनी दिन्छ, यदि तपाईं उनलाई देख्न अशुभ हुनुहुन्छ भने, होशियार रहनुहोस्, उनको सीsहरू लिन र तिनीहरूलाई फुक्नको लागि अनुमति माग्नुहोस्। खैर, उसले अन्ततः त्यो भेट भयो र उसले तुरही फुक्दा दर्जनौं चराहरू देखा पर्दछ र ती मध्ये एउटाले उसलाई टाढा लगेर बचाउँछ।
अन्य लोकप्रिय कथा त्यो हो वसिलीसा सुन्दर। यो केटी आफ्नो दुष्ट सौतेनी आमा र उनका दुई बहिनीहरू (सिन्ड्रेला, सायद?) सँग बस्छिन्। सत्य यो हो कि तिनीहरू उनलाई मार्न चाहन्छन् र त्यसो गर्ने योजना बनाए। तिनीहरू धेरै पटक प्रयास गर्छन् र अन्तमा उनीहरूले उसलाई सिधा बाबा यागाको झुप्पामा पठाउँछन् किनभने उनीहरू जान्दछन् कि उनले उनलाई खाइन्।
तर त्यसो हुँदैन, उनले उनलाई गृहिणीको रूपमा लिन्छिन् जसले उनलाई गाह्रो कामहरू गरिदिन, तर केटीले सबैकुरा ठीक गर्छ र त्यसपछि उसलाई घर फर्कन दिईन्छ। उहाँ एक वृद्ध महिलाको लालटेन, एक जादुई लालटिन संग फर्कनुहुन्छ, जसले उनको दुष्ट परिवारलाई उज्यालो पार्दछ र जीवित जीवित राख्दछ। र अलविदा नराम्रो परिवार र खुशी संसारलाई स्वागत छ किनकि अन्तमा सुन्दर वासिलिसा जारसँग विवाह गर्दछ।
यी दुई खाताहरू को उदाहरण हो बाबा यागाको लोक चरित्रको अस्पष्टता: उनी राम्रा छिन र नराम्रा छिन, उनी निर is्कुश छिन र उनी भद्र र निष्पक्ष छिन्।। यो अस्पष्टता, लोक कथा विशेषज्ञहरूका लागि, प्रकृति र स्त्रीत्वसँग सम्बन्धित छ र यो कुराले लोककथामा अद्वितीय बनाउँछ।
किन? ठिक छ, किनभने प्राय जसो युरोपेली लोक कथामा चराहरू धेरै स्थिर छन् र तपाईंलाई तिनीहरूबाट के अपेक्षा गर्ने भनेर थाहा छ, वा सजिलो वा बाधकको रूपमा भूमिकाहरू सधैं खलनायक वा दिनेकोको हुन्छन्। र बाबा यागा भविष्यवाणी मात्र गर्न सकिन्छ।
लोकप्रिय संस्कृतिमा बाबा यागा
जबकि यो सधैं एक भएको छ स्लाभिक विश्व चरित्रकेहि समयको लागि, यसले सीमा नाघेको छ। हामीले भनेजस्तै, कमिक, टेलिभिजन र चलचित्रको संसारमा देखा पर्‍यो। टेलिभिजन श्रृंखला को मामला मा, यदि तपाईं देख्नुभयो OA, नेटफ्लिक्स द्वारातपाईलाई थाहा छ कि बाबा यागा सँधै दर्शनमा देखा पर्दछ।
मा पनि देखा पर्दछ ड्रागन बल, फॉर्च्यून बाबा यागाको लेखाकार, मा एक आवर्ती चरित्र हो Hellboy, Orson स्कट कार्ड द्वारा उपन्यास मा (एन्डर खेल को लेखक), जादू, को श्रृंखला मा स्कूबी-डू!, भिडियो खेलमा मकबरा रैडरको उदय र मा कास्टलेभानिया: छायाको प्रभु र पनि श्रृंखला मा यूहन्ना Wick, केवल आफ्नो उपस्थितिहरु को नाम लिन को लागी।
र यदि ती सबै उपस्थिति पर्याप्त थिएनन्, ऊ ए मा देखा पर्दछ नारीवादी वेबसाइट, हेयरपिन, पछि एकमा हाम फाल्न बाबाको दृष्टिकोणबाट सल्लाह मा पुस्तक, "बाबा यागालाई सोध्नुहोस्।"
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » रूसी परम्परा: बाबा यागा
लिलियन हर्नान्डेज भन्यो
रूसी परम्पराको बारेमा जान्न म सँधै उत्सुक थिए। जब म सानो थिए मसँग एक रूसी कथा पुस्तक थियो र त्यहाँ "बाबा यागा" जस्तो रहस्यमय पदहरू थिए।
धन्यवाद अब मैले राम्रो व्याख्या पाएँ।
लिलियन हर्नान्डेजलाई जवाफ दिनुहोस्
रोम, रोममा सब भन्दा विलासी आसपासका एक